Vaovao - Valve ho an'ny rafitra hydrogenation avo lenta
Valve ho an'ny rafitra hydrogenation pression avo
Ny teknolojia hydrogenation ho an'ny solika dia dingana lehibe amin'ny vokatra solika, fanovana ary fanodinana solika mavesatra. Tsy vitan'ny fanatsarana ny halalin'ny dingana faharoa amin'ny solika solika sy ny tahan'ny fanarenana ny hydrocarbon light, fa koa ny fampitomboana ny kalitaon'ny solika solika ary hampihena ny fahalotoan'ny tontolo iainana. Noho izany, ny fitsaboana ny hydro, ny famotehana ny rano na ny fitsaboana Residue hydro ary ny rafitra hydrogenation hafa dia nanjary singa manan-danja amin'ny singa fanadiovana. Ny Unit hydrogénation dia ao anaty kilasy ahiana ahiana A, ny lafiny teknika lehibe dia ny fiakaran'ny maripana, ny tsindry avo, ny fanovana ny hidrogen. Valve tsindry haidrôdrônônika dia: teknolojia avo lenta, fitakiana kalitao hentitra, fiarovana sy fahatokisana.
Ny valva ho an'ny hydrogenation amin'ny tsindry ambony dia manana ireto toetra manaraka ireto, ho fanampin'ny asan'ny valves mahazatra:
Izy io dia manafoana ny fandefasana emissions an'ny mpanelanelana mba hahazoana antoka ny fanatanterahana ny valizy, ny karazana fifandraisana amin'ny vatana sy ny fotony dia ampiharina amin'ny tsindry voaisy tombo-kase, ary ny bonnet, peratra famehezana ary peratra misy singa efatra, sns dia isaina tanteraka araka ny EN 12516-2 hatramin'ny ialao ny famoahana.
Ny vatana dia manana fandalinana adin-tsaina eo ambanin'ny sehatry ny asa miaraka amin'ny rindrambaiko fandalinana ANSYS, ary ny zoron'ny faritra misy fihenjanana dia tanterahina ny famakafakana ny sary mihetsika mba hiantohana ny fahasimban'ny vatana, mba hialana amin'ny famoahana anaty.
Ny fonosana dia grafita madio (atin'ny karbaona madio ≥95%) ary peratra grafità mirandrana mifanindry avy amin'ny US GARLOCK Company. Ny hakitroky ny kavina grafitina efa niforona dia 1120kg / m3. Ary ny fonosana rehetra dia misy «inhibitor». Ny atin'ny chloride fahaizan'ny sivana dia <100ppm izay misy adhesives, lubricants ary additives hafa, mba hialana amin'ny fahasimban'ny fotony amin'ny alàlan'ny CI sy ny fandefasan'ny mpandeha ny mpanelanelana.
Ny fizotran'ny fizotran'ny tsindry dia miankina amin'ny fizotran'ny fanombanana ny fanarahan-dalàna, izay manana fanandramana tsy manimba 100%. Ny vokatra semi-vita amin'ny casting dia mifanaraka amin'ny takiana valves hydrogenation amin'ny mari-pana avo lenta sy avo lenta; Ny milina sy ny fivondronana dia ampiharina amin'ny fomba hentitra ny fanodinana sy ny fizotry ny fivoriambe.
Size 2 "~ 24"
Rating Kilasy 600 ~ Kilasy 2500
Fenitra famolavolana API 600, API 6D, BS 1873, ASME B16.34
Fitsapana & fanaraha-maso API 598, API 6D, ISO 5208, ISO 14313, BS 5146
Fitaovana momba ny vatana Carbon Steel, Stainless Steel, Steel Alloy, Steel Duplex
hetsika Kodiarana tanana, Gear, Motor, Pneumatika
Fanamarihana: ny haben'ny valizy mitohy mampifandray flange dia azo noforonina arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa.